Etu esi enyocha Hashtags kacha mma | Martech Zone
Etu esi enyocha Hashtag kacha mma
Sunday, December 20, 2015 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Hashtags nọnyeere anyị kemgbe ha igba egbe 8 afọ gara aga na Twitter. Otu n’ime ihe ndị mere anyị ji zụlite a Shortcode ngwa mgbakwunye bụ iji mee ka ọhụhụ anyị na Twitter. Akụkụ bụ isi nke nke ahụ bụ ikike ịgbakwunye hashtags n'ime shortcode. N'ihi gịnị? N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ọtụtụ ndị na-enyocha Twitter na ntọala na-aga n'ihu dabere na hashtags òkè. Dị nnọọ ka isiokwu dị oke mkpa iji chọọ, hashtags dị oke mkpa maka ọchụchọ na mgbasa ozi mmekọrịta.
Otu n’ime akwụkwọ ndị kacha ewu ewu bụ nke anyị ndepụta nke ihe eji eme hashtag nyocha dị na weebụ. Mana olee otu onye na-ere ahịa si eji otu n'ime ngwaọrụ ndị ahụ iji chọpụta ihe kacha mma nwere ike ime ka ọhụhụ mgbasa ozi ha na-elekọta mmadụ.
Ihe kpatara hashtags ji ewu ewu bụ n'ihi na ha na-ekwe ka ndị na-ege ntị sara mbara hụ post gị nke nwere ike ọ gaghị enweworị gị. Ọ dị mkpa ịghọta na e kere ha dị ka ọrụ, dị ka ụzọ iji belata usoro ahụ mgbe a bịara n'ịchọta ihe ndị ọzọ gbasara isiokwu ị nwere mmasị na ya.
Kelsey Jones, Ahịa Canada
Ihe atụ a sitere na Salesforce na-eji ọtụtụ ngwaọrụ.
On Tagboard, nkwanye bụ iji nyochaa ọnụ ọgụgụ, mmetụta na hashtags metụtara gafee ọtụtụ nyiwe mgbasa ozi mmekọrịta. Ebumnuche gị kwesịrị ịbụ ịchọpụta ihe ama ama kachasị dị mkpa maka isiokwu nke mgbasa ozi mgbasa ozi mmekọrịta ma ọ bụ isiokwu ị na-ekwu maka ya.
On Twitter, you nwere ike ahu nagide ọtụtụ search arụmọrụ. Chọọ okwu na igbe ọchụchọ ma ị nwere ikike ibelata nsonaazụ ahụ site na ọtụtụ taabụ - top (foto na tweets), ndụ, akụkọ, foto na vidiyo. Nwere ike iyo nyocha gafee Twitter ma ọ bụ naanị n'ime netwọkụ nke gị. Nwere ike ịchọ naanị gburugburu gị.
On Instagram, ị dị nnọọ mkpa pịnye hashtag na Instagram ga-ntabi-atụ aro na-ewu ewu na mkpado tinyere ha post adabere. Gbakwunye hashtags niile dị mkpa ma nwee ọnụ ọgụgụ siri ike.
Ọ bụ ezie na Twitter na-egbochi ihe odide gị niile na -ekere na mmelite gị, gụnyere hashtags, Instagram na-enye gị ohere ịkekọrịta ihe ruru 11 hashtags maka foto ọ bụla ma ọ bụ vidiyo ọ bụla ekenyere!
Nke a bụ ndụmọdụ m… ​​bụrụ agbanwe agbanwe! Cheedị onye ọrụ na-enyocha hashtag nke ị dere banyere ya na ọtụtụ akụkọ mgbasa ozi ndị ọzọ. Ugbu a, cheedị onye ọrụ na-enyocha hashtag ma na-achọpụta ọdịnaya na mmelite ọhụụ ị mepụtara. Kedu onye ị chere na-enye gị ohere ka mma ịgbaso, wulite mmata, tinye aka na akaụntụ ahụ, ma ọ bụ mechaa zụọ ahịa.
Cheedị onye ọrụ na-enyocha hashtag nke ị dere banyere ya na ọtụtụ akụkọ mgbasa ozi ndị ọzọ. Ugbu a, cheedị onye ọrụ na-enyocha hashtag ma na-achọpụta ọdịnaya na mmelite ọhụụ ị mepụtara. Kedu onye ị chere na-enye gị ohere ka mma ịgbaso, wulite mmata, tinye aka na akaụntụ ahụ, ma ọ bụ mechaa zụọ ahịa.
Tags: hashtags kacha mmahọrọ hashtagshashtag nyochaotúinstagramkelsey jonesndị ahịa canadatagboduTwitter
Dee 21, 2015 na 7: 06 AM
Daalụ maka ozi ahụ, Douglas. Ọ ga-amasị m ịgbakwunye ahụmịhe m na ojiji nke hashtag.
- Instagram. Obi nkoropụ dị ka ndị mmadụ na-eji ha maka spam na ọdịnaya na-ekwesịghị ekwesị. Ọmụmaatụ #sea na-egosi m naanị ihe onyonyo 4 metụtara oke osimiri na ndị ọzọ na ihe ọ bụla ọzọ mana ọbụghị oke osimiri.
- Twitter. Ọnọdụ ka mma, mana ọ ka dịchaghị mma. Naanị ihe m chọrọ ikwu bụ na ngwongwo nwere ike ịnwe ọfụma na-enye oke mkpọtụ. Yabụ iji dọta uche na ya ịkwesịrị iji ihe ọzọ, dị ka nnukwu foto ma ọ bụ kpọtụrụ ndị mmadụ na nkọwa
Dec 21, 2015 na 12:55 PM
Isi ihe, Alex. Kpamkpam na-akụda mmụọ mgbe a na-emegbu ha. Ikekwe ha ga-agbakwunye usoro mkpesa na ọdịnihu ebe enwere ike ijide ndị na-egwu spam hashtag ma hichapụ akaụntụ ha.